गाढा प्रचार फिक्का फिल्म
फिल्म रिलिज हुनुअघि दर्शकलाई मास्क, रुमाल र क्यालेन्डर जस्ता उपहार बाँड्न मरिहत्ते गर्छन्, निर्माता/निर्देशक। आफ्नो फिल्मप्रति दर्शकको ध्यान तान्न खोज्नु ठीकै हो। पछिल्लो प्रवृत्ति हेर्दा फिल्म बनाउनभन्दा फिल्मको प्रवर्द्धनमा धेरै...
गजब कतिसम्म छ भने सेक्स उद्योग र चलचित्र उद्योग दुवैलाई मनोरञ्जन उद्योग भनेर मान्नेहरू पनि छन्। पत्रपत्रिकामा पनि धेरैले चलचित्रलाई मनोरञ्जनकै क्षेत्र मान्छन्। यो हो पनि। चलचित्रमात्रै किन, कलाका सबै...
शुक्रबार १ फागुन, २०७१
मैले कलेजमा आफूसँगै पढ्ने साथीसँग लामो समय प्रेम सम्बन्ध राखेपछि नै विवाह गरेको हुँ। तर, प्रेम सम्बन्धकै बारेमा धेरै दिमाग लगाएर घोत्लिएको भने छैन। एकताका ओशो पढ्दा उनले नित्सेका बारेमा भनेको सुनेरै मैले प्रेमका बारे धेरै दिमाग नखियाउने निधो गरेँ…
इतिहासका प्रेम प्रकरण
फेब्रुअरी १४ अर्थात् भ्यालेन्टाइन्स डे नेपालमा मनाउने चलन बढ्दै गएको छ। पश्चिमा देशबाट सुरु भएको यो चलन विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको छ। शहरका युवायुवतीले प्रेम दिवसका रूपमा यसलाई धुमधामसँग मनाउने गरेका छन्। नेपालको इतिहास केलाउँदा प्रेममा परी गरिएका धेरै राम्रा तथा…
डा. अभि सुवेदी, साहित्यकारमान्छेले प्रेममा जत्रो नाटक अरू केही कुरामा गरेको देखिएन। सबैभन्दा प्रकट रूपमा गरिने प्रेम हो। तर, सबैभन्दा लुकाएर हि"डिने पनि प्रेम नै हो। यो दुईवटा कुरा सबैलाई थाहा छ, तर त्यो प्रकट गर्ने र लुकाउने काम नित्य…
पुष्कर शाह/विश्व साइकल यात्री
विश्व साइकल यात्री पुष्कर शाह 'संसारलाई साढे पा"च फन्को' किताब लेखेर चर्चामा छन्। उनले गरेको यात्रा मात्रै रोचक छैन, उनको प्रेमजीवन पनि उत्तिकै रोचक छ। शुक्रवारका लागि दीपक सापकोटाले उनीसँग भ्यालेन्टाइन्स डेको पूर्वसन्ध्यामा वार्ता गरेका थिए। प्रेम, सेक्स र रोमान्सबारे…
बिहीबार २९ माघ, २०७१
भनिन्छ, प्रेमका लागि एक पल पर्याप्त हुन्छ। अभिनेत्री नीता ढुंगानाले दशक लामो फिल्म करिअर धेरै पुरुषसँग संगत गरिन्। समाजले 'लायक'को परिभाषामा पार्ने सुन्दर, प्रतिभाशाली र धनाढ्य केटाहरू भेटिन्। तर, कहिल्यै उनको मनले त्यस्तो आभास गरेन, जस्तो एउटा स्कुलको कार्यक्रममा आमेश…
अम्मर जिसी/जीवन पुडासैनी
केही सय पदका लागि लाखसम्म आवेदन पर्छन्। लोक सेवा आयोगको परीक्षा दिनेहरूको लर्को अनन्त लामो हुन्छ। सरकारी जागिरमा आखिर के छ त्यस्तो? सुनिश्चित भविष्य, सामाजिक प्रतिष्ठा, प्रगतिको अवसर, आकर्षक सेवासुविधा...सरकारी जागिरमा धेरै थोक देखेका छन् युवाहरूले। जानेबुझेकाहरू भन्छन्- उद्यमशील संस्कृतिको…
विसं २०२२ देखि हरेक वर्ष असार ९ गते नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले आयोजना गर्ने राष्ट्रिय कविता महोत्सव यसपल्ट माघ २६ गते हुँदैछ। असार ९ गते आयोजना हुन नसकी स्थगित भएको महोत्सव यसपल्ट पहिलेको भन्दा भिन्न हुने प्रतिष्ठानका काव्य विभाग प्रमुख अमर…
मिस टुरिजम, मिस कोशी, मिस पूर्वेली सुपरमोडल, मिस लिम्बू, मिस पूर्वाञ्चल। पूर्वमा यतिबेला धमाधम सुरु भएका सुन्दरी छान्ने प्रतिस्पर्धाका 'टाइटल' हुन् यी। पूर्वमा हरेक वर्ष यतिबेला यस्ता सुन्दरी प्रतिस्पर्धा हुन्छन्। विभिन्न नामका 'टाइटल' जित्नका लागि पूर्वेली युवतीहरूको प्रतिस्पर्धा त हुन्छ…
माघ ८ पछि सत्तारूढ गठबन्धन र विपक्षी मोर्चाका बीच बिग्रिएको सम्बन्ध सुधार गर्ने जिम्मा पाएका प्रधानमन्त्री कोइरालाले 'सरप्राइज' ढंगले एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डलाई उनकै निवास गएर भेट गर्नेबाहेक राजनीतिक गतिरोध तोड्नेगरी यो अवधिमा संवाद प्रक्रिया सुरु गर्न सकेका छैनन्।